khabar silo – Page 117 – Khabar Silo
वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालबाट दुई जना कोरोनाभाइरस संक्रमित फरार भएका छन् । अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचार गराइरहेका दुई जना बुधबार फरार भएका हुन् । अस्पतालको आइसोलेसन कक्षबाट राजनाथ यादव र जफर हवारी भन्ने दुईजना फरार भएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । पर्सामा हालसम्म ८२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने त्यसमध्ये तीन जना डिस्चार्ज भइरहेका छन् […]
आयुर्वेद उपचारले कोरोनावाट मानिसको मृ’त्यु रोक्ने ग्यारेन्टी, आयुर्वेदका ज्ञाताको अनुभव सहितको यो डकुमेन्ट्री हेर्नुहोस् (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं । सबैभन्दा बढी मिहिनेत गर्नुपरेको हो यो डकुमेन्ट्री बनाउन । बिषय वस्तुसंग संबंधित सबै कुराहरुको सूक्ष्म र गहन अध्यन गरेर त्यसपछि लेख तयार पारेर यो डकुमेन्ट्री तयार पारिएको छ । अनि त्यो लेखमा लेखिएका हरेक शब्दहरुको पुष्टि गर्ने आधार पनि खोज्ने प्रयास गरिएको छ । डकुमेन्ट्रीमा उल्लेख भएका विषयवस्तुलाई सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी प्रष्ट्याउने प्रयास […]
गण्डकी प्रदेश : ग्रिन जोन कि भयावहको पर्खाइमा ?
﻿३१ वैशाख, पोखरा । कामका लागि भारतको कर्नाटक पुगेका एक युवक १२ दिन लगाएर मंगलबार पोखरा आइपुगे । भारतमा कति ठाउँमा हिँडे, कतै प्रहरीलाई पैसा दिँदै गाडी चढे र उनी नेपाल छिरे । नेपाल छिरेपछि उनी तरकारी बोक्ने गाडी चढेर पोखरा भित्रिए । युवक फर्किएको स्थानीयबासीले थाहा पाए र प्रहरीलाई खबर गरे । प्रहरी पुग्दानपुग्दै […]
३१ वैशाख, काठमाडौं । बुधबार दुई जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कपिलवस्तु र बाँकेमा थप १÷१ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका– ८ का ३६ वर्षका पुरुष र कपिलवस्तु नगरपालिका– ५ का २२ वर्षका युवकमा कोरोना […]
सरकारले जेठ १ गते बिहीबारदेखि देशभरको आवातजावत थप कडाइ गर्ने भएको छ। बाहिर जिल्लाबाट काठमाडौं आउन अब जिल्ला प्रशासनको अनुमतिले पाइने छैन। यसका निम्ति गृह मन्त्रालयबाटै छुट्टै पास लिनुपर्नेछ। गृह मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर कुनै पनि सवारीसाधन काठमाडौं उपत्यका छिर्न पाउने छैनन्। पासको निवेदन दिँदा आउजाउ गर्नुको प्रयोजन र कारण पनि स्पस्ट खुलाउनुपर्नेछ। गत तीन दिनमा […]
३१ वैशाख, काठमाडौं । नेपालमा बुधबार थप एक जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । काभ्रेको धुलिखेल अस्पतालस्थित ल्याबमा परीक्षण गर्दा बाँकेका ३६ वर्षका युवकमा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या २१८ पुगेको छ ।
वीरगञ्जका १८ जना संक्रमित अस्पतालबाहिर
३१ वैशाख, काठमाडौं । कोरोना अस्पतालको रुपमा रहेको वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा शय्या अभाव भएपछि १८ जना कोरोना संक्रमित अस्पतालबाहिर रहेका छन् । मंगलबार नै संक्रमण पुष्टि भए पनि शय्याको अभावले उनीहरुलाई अस्पताल लान नसकिएको हो । नरायणी अस्पतालको स्रोत अनुसार अहिले अस्पतालमा ६९ जना कोभिड १९ का बिरामी उपचाररत छन् । बाँकी १८ जना अझैसम्म […]
एजेन्सी दोहा । नेपाली र भारतीय कामदारहरुको निकै ठूलो संख्या रहेको कतारमा कोरोनाभाइरसबाट संक्रमितको संख्या २५ हजार १४९ पुगेको कतारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले मंगलबार मात्र एक हजार ५२६ जना नयाँ संक्रमित भेटिएको बताएको छ । कूल संक्रमितमध्ये हाल २२ हजार ११६ जना उपचारका क्रममा रहेका छन् । कतार समाचार एजेन्सीका अनुसार कतारमा […]